SQL Server & MS Access Kere maka wii wii na Hemp Ulo oru
Ọghọm - Omenala Development
Ọ bụrụ n ’ị gbataghị ọrụ mmepe n’ụzọ ziri ezi, ị gaghị enweta ihe ị chọrọ.
Ọ bụrụ n'inwere koodu ọnye mepụtara site n'aka onye nrụpụta (ma ọ nyeghị akwụkwọ), mgbanwe nke koodu dị ugbu a nwere ike isi ike.
Ọ dị mfe iji… M zutere ọtụtụ “gbajiri” ngwa wuru site ike ọrụ na ndị ọzọ… ha ruru ebe nkà ha (ma ọ bụ oge ịmụta) ezughị ọrụ ahụ,
Nweta Cloud Database
Ihe ngwọta igwe ojii na-aghọwanye ewu ewu, ebe ha na-enye ndị ọrụ ohere ijikwa data ha na ịntanetị, na-eji ọtụtụ ngwaọrụ, na-enweghị ịnye sava, wdg na azụmahịa ha. Ọtụtụ n'ime ihe ngwọta ndị a chọrọ nhazi na ụfọdụ mmemme, agbanyeghị.
Nsonaazụ Usoro Ọdụ data Custom
Ọ bụ ezie na enwere ike ịhazi Access na Excel, ọtụtụ obere azụmaahịa ga-ahọrọ ịga yana usoro nchekwa data ọdịnala, n'ihi mkpa data ha na otu ha kwesịrị isi jikwaa, nyochaa ma kesaa ozi ahụ. Ngwọta omenala na-enye ndị azụmaahịa ohere ịhọrọ usoro ha (weebụ, desktọọpụ, mkpanaka, niile) yana nchekwa data azụ (Sava SQL, MySQL, wdg)
Uru - Ihe kpatara eji MS Access
Ọsọ iji zụlite ụdị, akụkọ na ajụjụ.
Microsoft gụnyere ọtụtụ ndị ọkachamara iji duzie okike nke ụdị na akụkọ.
Ezigbo onye edemede akụkọ.
Uru - Omenala Development
Nweta ihe ị chọrọ.Ọ nwere ike ịme ihe ngwọta na ọtụtụ nyiwe na teknụzụ, dabere na nkọwa gị. Have nwere onye mmekọ ọzọ (ndị DBA na Programmers) na-arụ ọrụ gị iji hụ na ihe niile na-arụ ọrụ… nke ahụ bụ ọpụrụiche ha.
M na-ahụkarị ndị folks na-eji MS Excel maka njikwa data, yana ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka obere ndepụta, wdg, n'ozuzu ya adabaghị maka ịchekwa data.
Uru - Gini mere iji MS Excel
Mfe Mbido na ojiji.
A na-ewu nyocha na Excel.
Mfe iji chekwaa ma kesaa.
Ọghọm - Gini mere iji MS Excel
Multi-ọrụ ike na-ejedebeghị (ee, i nwere ike inwe ọtụtụ ndị mmadụ nweta otu faịlụ ozugbo, ma nke a n'ozuzu bụghị a ezi echiche ka ịdekọ kpochidoro mbipụta).
O nwere ike isi ike ịtọ ntọala ntinye data siri ike na-enweghị ezigbo ihe ọmụma nke VBA (Visual Basic for Applications). Nchekwa data adịghị iche na koodu na nyocha.
Adabaghị nke ọma maka ijere data na weebụsaịtị (mgbe ejiri ya dị ka ihe data, ọ bụghị naanị dị ka njikọ nbudata).